မြတ်လေးငုံ: မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုသိမ်လာရောက်တဲ့နေ့တွေ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၆ရက်နဲ့ ၇ ရက်တွေမှာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ရုတ်တရက်စာမေးပွဲပြုလုပ်မည်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုသိမ်လာရောက်တဲ့နေ့တွေ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၆ရက်နဲ့ ၇ ရက်တွေမှာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ရုတ်တရက်စာမေးပွဲပြုလုပ်မည်
ကျွန်တော်က ပုသိမ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းလမ်းမကြီးမှာ မိတ္တူဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့သူတယောက်ပါ. .
ခုလတ်တလောကြားရတဲ့သတင်းက တော်တော်လေးကို မမျှတဘူးလို့ ကျနော်ထင်မိတယ်
ပြည်သူလူထုရဲ့ အချစ်တော် အန်တီစု (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) ပုသိမ်မြို့ကို ခုလာမယ့် ဖေဖေါ်ဝါရီ7ရက်နေ့ လာရောက်မယ်လို့ သတင်းကြားလို့ ကျနော်တော်တော်လေး ပျော်ရွှင်ရတယ်. . ကျနော့်လိုပဲ အန်တီစု၊ အမေစုကို ချစ်ကြတဲ့ပုသိမ်မြို့သူမြို့သားတွေလည်း ပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်. . . အမေစုရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေလည်း နားထောင်ချင်တယ်. . လူကိုလည်း မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ချင်မိကြတာပေါ့. . . အထူးသဖြင့် အမေစု ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တခုဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေ လူငယ်တွေကို စိတ်ဓါတ်ရေးအရ ကြံ့ခိုင်အောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ရည်ရွယ်ထားချက်တွေ မိန့်ခွန်းတွေကို နားထောင်ရတာ တအားအားရကျေနပ်ရပါတယ်. ..
ဒါပေမယ့် ကျနော့်သူငယ်ချင်း တက္ကသိုလ်ဆရာတယောက်စီက ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကြောင့် ကျနော် တော်တော်လေး တင်းသွားပါတယ်. .ဒေါသထွက်သွားပါတယ်. .. ခုလို မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ပညာရေး အခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ စည်းစနစ်ကျတဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ဦးတည်သွားနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ကျနော်ကြားရတဲ့ ခုလိုသတင်းမျိုးက မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်. . ပြည်သူရဲ့ အပြည့်အ၀ထောက်ခံမှုကို ရနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုသိမ်မြို့ကို လာရောက်တဲ့နေ့တွေ ဖေဖေါ်ဝါရီ 6ရက်နဲ့7ရက်တွေမှာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ရုတ်တရက်စာမေးပွဲ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို Pre exam အနေနဲ့ စစ်မယ်လို့ သတင်းကြားလိုက်ရပါတယ်. . . အန်တီစု ကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေနဲ့ ပေးမတွေ့ချင်တဲ့ သဘောပါပဲ. . အထက်က အမိန့်ပေးတယ်လို့ သတင်းကြားမိပါတယ်.. . . တကယ်တော့ နောင်တခေတ်ရဲ့ မဝေးတော့တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်ကို ခေါင်းဆောင်ကြမယ့် ပညာတတ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးအသိစိတ်ဓါတ် အပြည့်ရှိနေရပါမယ် ကိုယ့်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ အရေးကိစ္စမှန်သမျှမှာ ပွင့်လင်းညင်သာ အဆင်ပြေစွာ စီးဆင်းရမယ့် အနေအထားမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူ လူငယ်လူရွယ်တွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့ အနေအထားမျိုးဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်သင့်ပါဘူး လှူု့အခွင့်အရေးအရလည်း ငြိပါတယ်. .. . အထက်အာဏာပိုင်တွေဟာ ရည်ရွယ်ချက်မှားနေပါတယ်. ဆူညံအုန်းပွက် ဘာမှ အရေမရအဖတ်မရ စတိတ်ရှိုးပွဲတွေမှာတော့ လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေကြပြီး ခုလို့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ် လေးနက်တဲ့ လူငယ်တိုင်း နားထောင်ရမယ့် စကားမျိုးတွေ လူတွေကိုတော့ ပေးမတွေ့ပဲ ပေါ့ပျက်ပျက်အနေအထားမျိုးတွေမှာ လူငယ်တွေကို လွတ်ပေးထားတာဟာ. . . နိုင်ငံတနိုင်ငံကို ကောင်းမွန်စွာ Clean Government အနေအထားမျိုး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကြွေးကြော်နေတာ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း လျှောက်ပြောနေတာလို့ ကျနော် မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်. .. တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်ကောင်းမွန်ရေးဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ လူငယ်လူရွယ်တွေလက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်. . အသိစိတ်ဓါတ်တွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ တအားလိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ပိတ်ပင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက် အထက်အာဏာပိုင်ဆိုတဲ့ ပုဂိုလ်တွေကို ကျနော် လုံးဝကို ရှုတ်ချပါတယ်. . . ပုသိမ်မြို့ကို လုံးဝကို အားမရပါဘူး. . . နောင်တခုက သူတို့စိုး၇ိမ်တာက လူငယ်တွေ ဆူညံပြီး ထိန်းမရသိမ်းမရဖြစ်မှာလို့ အကြောင်းပြပါမယ်. . တကယ်တန်းက လူငယ်တွေချစ်တဲ့ ပြည်သူချစ်တဲ့သူတယောက် ဦးဆောင်တဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဆူညံပြီး ထိန်းမရသိမ်းမရဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး. . တအားထိန်းသိမ်း ကြပ်မတ်လွန်းရင် ပေါက်ကွဲထွက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ပညာသဘောတရားကို သူတို့တွေ နားမလည်ပါဘူး. . ခုထိ Army Style ကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ Government ကို ရှုတ်ချပါတယ်
ကျနော်ဟာ နိုင်ငံရေးသမားတယောက် လုံးဝမဟုတ်ပါ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်
ခုလို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ခုလို fucking blocking, restricting, တွေ ရှိနေတာဟာ ကျနော်တို့ ပုသိမ်မြို့အတွက် နိုင်ငံတခုလုံးအတွက်ကို မကောင်းတဲ့အနေအထားပါပဲ. . .
ကြာသပတေးနေ့၊ ညနေ 4း15
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, February 03, 2012
ပြည်သူအတွက် အကျိုးမရှိသော ဥပဒေများပြင်ရန်ကြိုးပမ်း...
ဗထူးကွင်းအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခရီးစဉ်အတွက် မငှားရ...
ကင်တာနား နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မျာ...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပု...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်...
ကွယ်လွန်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွင် အစားထိုး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးကို လာမယ်။ မန္တလေးမြို့က ဘ...